ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): September 2009
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:41 AM0comments Links to this post
“အိပ်မက်လောက” ထဲမှ တတုံ တတုံထွက်၍ “ဒိဋ္ဌလောက” ထဲ၌ စိတ်ကိုထားခြင်းအားဖြင့် တစ်ချက်တစ်ချက်တွင် သိမြင်ရသော အခြင်းအရာများမှာ တန်ဖိုးရှိလှသည်။ အတော်ကြီးကျင့်သားရလာသောအခါ “အိပ်မက်လောက” မှထွက်၍ ဒိဋ္ဌလောကသို့ဝင်လိုက်ဆိုလျင်ပင် ယခင်က ပူပန်သောကရောက်ခြင်းများ၊ အလိုမကျသဖြင့် ဒေါသဖြစ်ခြင်း စသော နှလုံးမသာယာမှုများသည် မီးကို ရေနှင့် ငြိမ်းသတ်လိုက်ဘိသကဲ့သို့ရုတ်ချည်း ပျောက်ကွက်သွားတတ်ပေသည်။
သတိလွတ်နေခြင်းကြောင့် ပူပန်စရာထင်၍ ပူပန်မိရာမှ ရုတ်တရက် သတိရ၍ ပူပန်စရာမဟုတ်ကြောင်း သိရသည်နှင့် တပြိုင်နက် အပူကင်းကွာသွားပုံကို ဥဒါဟရုဏ်ဆောင်၍ ပြရဦးမည်။
မင်းသမီးနှင့်မင်းသား ယိုးဒယားကဟန်ဖြင့် ထွက်လာခြင်းကို ပွဲထဲ၌ မြင်ဖူးကြပေလိမ့်မည်။ မင်းသားသည် ရှေ့ ကထွက်လာ၍ မင်းသမီးက နောက်မှကပ်ပါလာ၏။ နှစ်ယောက်စလုံးသည် ဆိုင်းချက်နှင့် ကလျက်ရှိကြသည်။ ကိုယ့်ဟန်နှင့်ကိုယ် ကလျက်ရှိရာမှ တစ်ချက်တစ်ချက်တွင် မင်းသားက နောက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်တိုင်း မင်းသမီးသည် လက်အုပ်ချီလျက် ရှိခိုးနေခြင်းကို တွေ့ မြင်ဖူးကြပေလိမ့်မည်။ မင်းသားသည် ရှေ့ သို့ လှည့်လျက် ကသည့်အခါတိုင်း မင်းသမီးသည် ကချင်သလို ကလျက်ရှိသော်လည်း မင်းသားက နောက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သော အခါများတွင် မင်းသမီးမှာ လက်အုပ်ချီလျက်သာ တွေ့ ရသည်။
“ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌ မတ္တံ” အလုပ်၌ ၀ါရင့်သောယောဂီ၏ စိတ်မှာလည်း သတိလွတ်ခိုက်တွင် ရောက်ချင်ရာ ရောက်နေစေကာမူ၊ သတိရ၍ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ယိုးဒယားကသော မင်းသမီး၏ လက်အုပ်ချီခြင်းကဲ့သို့ပြားပြားဝပ်လျက် ရှိနေသည်ကို တွေ့ ရတတ်ပေသည်။ သို့ ဆိုလျင် အတော်ဟန်ပြီဟု ၀မ်းမြောက်ထိုက်ပေပြီ။ မဂ်ဆိုက်ခြင်းမျိုးကား မဟုတ်သေးပေ။
ဘာကြောင့် “ငါ” ထင်ရသနည်း
ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုး ရှိသည့်အနက် ရုပ် (ကိုယ်) ကောင်ကြီးကို “ငါ” ထင်သူများလည်း ရှိ၏။ ကြံစည်စိတ်ကူးတတ်သော စိတ်ကလေးကို “ငါ” ထင်တတ်သူများလည်း ရှိ၏။ ကိုယ်နှင့် စိတ်တို့ ကို ပိုင်ဆိုင်သော ဥစ္စာရှင် “ငါ” ကောင်ကလေး (soul or atman) တသီးတခြားရှိသေးသည်ဟု ယူဆသူများလည်း ရှိကြ၏။ အနောက်တိုင်းပြည်များ၌ “ငါ” ရှိသည်ဟူသော အထောက်အထားကို ဒဲ့စ်ကာတီ (Descartes) ဟူသော ဂရိတ်ပညာရှိကြီး တင်ပြခဲ့ဖူးသည့်အတိုင်း သူငါကစ ပြောတတ်ကြသည်။ ၄င်းဆရာကြီးက (I think, therefore I am) “ငါစဉ်းစားသည်။ ထို့ ကြောင့် ငါရှိသည်။” ဟု ပြောခဲ့သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ စဉ်းစားစိတ်ကူးတတ်သော ငါကောင်ကလေးရှိနေခြင်းကို ထောက်ခြင်းအားဖြင့် ငါရှိကြောင်းထင်ရှားသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေးပညာရှိကြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်က တင်ပြထားခဲ့သော အကိုးအကားဖြစ်သည်ဆို၍ အနောက်တိုင်းပြည်များတွင် အတော်အတန်လူများ မငြင်းဝံ့ဘဲ လက်ခံထားကြသည်။ စင်စစ်မှာလည်း စဉ်းစားစိတ်ကူးတတ်သော သဘာဝကဲ့သို့“ငါ” နှင့်တူသော အခြင်းအရာသည် မရှိတော့ချေ။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် (တရားအားမထုတ်ရသေးမီက) ဤအတိုင်းပင် မျက်စိလည်ခဲ့ဖူးသည်။ ဤကိုယ်ကြီးသည် သေဆုံးသောအခါ၌ မြေကြီးထဲသို့ ရောက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် “ငါ” မဟုတ်နိုင်။ သို့ သော် စဉ်းစားကြံစည်တတ်သော စိတ်ကလေးမူကား “ငါ” အဖြစ်နှင့် ဘ၀တပါးသို့ကူးပြောင်းသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆခဲ့ဖူးလေသည်။ (စာထဲက ဘယ်လိုဆိုစေ၊ ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်မှ လက်ခံနိုင်သည်။) သို့ သော် “ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ” နည်းအတိုင်း လေ့ကျင့်၍ “အိပ်မက်လောက” ထဲမှထွက်ပြီး “ဒိဋ္ဌလောက” ထဲ၌ ခဏခဏ နေဖန်များလာသောအခါ စဉ်းစားကြံစည်တတ်သော သဘောတရားကလေးသည် “ငါလည်းမဟုတ်၊ ငါ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်၊ ပိုင်ဆိုင်သော ဥစ္စာရှင်လည်း မရှိသည့်အဖြစ်ကို တစ်လထက် တစ်လ လက်တွေ့ သဘောကျလာပေတော့သည်။ “ငါ” သော်လည်းကောင်း၊ “ငါ့ပစ္စည်း” သော်လည်းကောင်း ဟုတ်ခဲ့ပါမူ၊ ငါထားသောနေရာ၌ နေမည်။ မကြံစည်ပါနှင့်ဟု အမိန့် ပေးလိုက်လျင် (ငါပိုင်ဆိုင်ရိုးမှန်ပါက) ငါ့စကားကို နားထောင်ရမည်။ သူသွားချင်ရာသွား၍ ကြံခဲ့ပြီး မောတော့မှ အိပ်သောဟာကလေးကို “ငါ” ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ “ငါ့ပစ္စည်း” ဟူ၍ လည်းကောင်း ဘယ်နည်းနှင့် မှတ်ယူသင့်ပါသနည်းဟု သဘောကျမိသည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:49 AM0comments Links to this post
Meditation refers to the mental activity of sustaining conscious awareness on one thing, perception, concept, process or sensation. This may be, for example, the process of breathing, an external object, the concept and emotion of loving-kindness,ameaningful word,aphysical sensation or the perception of impermanence Meditation can be done in any posture, but the most common ones are sitting cross-legged and walking back and forth. As mindful attention becomes increasingly continuous, the dispersed and distracted energy of the mind becomes more focused and clear. The act of sustaining awareness calms and soothes both the body and mind, while the focusing of attention energizes and brightens the mind.
The deeper the meditation becomes, the more quiet, still and blissful one feels. This cleansed and purified awareness, developed through repeated training, yields extraordinary clarity of mind. One begins to see things as they truly are, beyound the limitations of conditioned perceptions and habitual thought patterns. As one sees clearly, wisdom is born, and thus serenity and insight form an inseparable pair that are gradually cultivated through meditation.
Labels: Dhamma Articles, What is Buddhism?
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:35 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:59 AM 1 comments Links to this post
The Buddha warned against blind faith and encouraged wise inquiry and tolerance. In one of his talks he pointed out the danger in basing one's beliefs merely on the following criteria: hearsay, tradition, because many others say it is so, the authority of ancient scriptures, due to logical deduction, or out of respect for one's teachers, elders or priests. Instead the traveler on the path of inquiry should maintain an open mind and thoroughly investigate his or her own experience of life. When one sees for oneself thataparticular view or belief is both reasonable and in accordance with one's experience, leading to happiness for both oneself and others, only then should that view be adopted. This standard of course applies to the Buddha's own teachings. They should be looked into carefully, and examined with the clarity generated by meditation. As meditation deepens, direct insight into the nature of life grows. Only at this point do the teachings offer the bliss of liberation.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:21 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:04 AM0comments Links to this post
The Illusion Of A Permanent Self Or Soul
The Buddha taught that there is no essential or permanent core toaliving being that could be considered one's true self or soul. What appears to be an individual person is actuallyachanging process of mental and physical qualities combining temporarily inaparticular way. Through possessive attachment, the mind identifies with part or all of this process, and this gives rise to the sense of self, 'me' and 'mine'. In fact, all phenomena, animate or inanimate, are dependently arisen from causes and conditions. Inaconstant state of flux, all things are empty of independent inherent existence and the entirety of reality isacontinuous flow of interconnected, causally conditioned events arising and passing away in the present moment
Rebirth however, still occurs withoutasoul. Consider the simile ofacandle burning low and about to go out. A new candle is then lit from the old one. Though the old candle goes out, the new candle now burns brightly. What went across from the old candle to the new? There wasacausal link, but no 'thing' went across Similarly, there wasacausal link between one's past and present life, but no soul went across.
The Buddha taught that it is precisely this deep misunderstanding, the illusion ofaself, that is the root cause of all human suffering. The illusion of self manifests as the ego, and the natural unstoppable function of the ego is to control. Big egos want to control the world, average egos attempt to control their immediate surroundings of home, family and workplace, and all egos strive to control what they assume to be their own bodies and minds. This attempt to control leads to attraction and aversion which consequently proliferates to acquire possessions, manipulate others and exploit the environment.
Although the sense of self seeks its own happiness, its insatiable craving repeatedly produces discontent. As long as one identifies with somethings as oneself, the inevitable result isalack of outer harmony or inner fulfillment. Only through sharp insight based on profound meditation can this mirage be clearly seen for what it truly is. Only then can one know perfect happiness.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:42 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:31 PM0comments Links to this post
“ထင်ကြေး” နှင့် ကြည်နူးခြင်း
တဖန် သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆိုကြခြင်းများ၊ ပန်းစည်းဆက်ကြခြင်းများသည် အတိတ်ကာလ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အခြင်းအရာများသာဖြစ်၍ ဆိုဖာကြီးပေါ်၌ ၀န်ကြီးထိုင်လျက်ရှိသောအချိန်တွင် ပြီးပျက်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီ မဟုတ်ပါလော။ ထိုအချိန်တွင် ကြိုဆိုကြသော အရာရှိများနှင့် မြို့ မိမြို့ ဖများအနက်မှ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပင် ကွယ်လွန်ချင် ကွယ်လွန်နိုင်ပြီ မဟုတ်ပါလော။ ၀န်ကြီးအား စည်စည်ကားကား ကြိုဆိုနိုင်စေရန်အတွက် အချို့ အလုပ်ရုံမှ အလုပ်သမားများအား ပိုက်ဆံပေးပြီး အလုပ်ပိတ်ပေးရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ရှက်တတ်ပါသည်ဆို၍ ပန်းစည်းမဆက်ချင်သော အမျိုးသမီးကလေးအားလည်း ချော့မော့၍ဖြစ်စေ၊ ခြိမ်းခြောက်၍ဖြစ်စေ တိုက်တွန်းခဲ့ရခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြိုဆိုကြရသော အရာရှိများအနက်တွင်လည်း ၀န်ကြီးတွေ ခဏခဏ ကြိုဆိုကြရ၍ အလုပ်ပျက်လှသည်ဆိုကာ မလွဲမရှောင်သာ၍ စူစူအောက်အောက်နှင့် လိုက်ပါလာရသူများလည်း ပါနိုင်သည်။ ရာထူးတိုးဖို့ မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ကြိုဆိုကြသော အရာရှိများလည်း ပါနိုင်သည်။ ၀န်ကြီးတစ်ယောက်နှင့် မျက်မှန်းတန်းမိလျင် မြတ်သည်ထင်သော မြို့ မိမြို့ ဖများလည်း ပါနိုင်သည်။ မနေ၀ံ့သောကြောင့် မလွှဲသာ၍ လိုက်ပါလာကြသော မြို့ မိမြို့ ဖများလည်း ပါနိုင်သည်။
သို့ ပါလျက် ၀န်ကြီးကမူ ယာဉ်ပေါ်မှဆင်း၍ ပရိတ်သတ်ထုကြီးကို မြင်လိုက်ရသည်နှင့် တပြိုင်နက် “ငါ့ကို ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကြောင့် ကြိုဆိုကြသည်” ဟု အားလုံးသိမ်းကျုံး၍ “ထင်” လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းမွေးသပ်မိလေတော့သည်။ မူလကတည်းက ထင်ကြေးဖြင့် ကြည်နူးခဲ့ရသော အခြင်းအရာတစ်ခုခု ပြီးဆုံးသွားသည်တိုင်အောင် နောင်အခါကာလ၌ ပြန်လည်တွေးတောခြင်းအားဖြင့် (ချေးခြောက်ကို ရေနှူးပြီး) ကြည်နူးရခြင်းသည် ဘယ်လောက်များ ခံတွင်းတွေ့ ဖို့ ထိုက်ပါသနည်း။ အိပ်မက်ထက်ပိုပြီး ဘယ့်ကလောက် ခြေခြေမြစ်မြစ် မည်မည်ရရ ရှိပါသနည်း။
၀န်ကြီးတစ်ယောက်ကို ဥဒါဟရုဏ်ဆောင်၍ပြရခြင်းမှာ ဤလက်ထက်၌ လူအများမက်မောကြသော အခြေအနေမျိုးဖြစ်သောကြောင့် ထင်ရှားစေရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပေရာ၊ ခပ်သိမ်းသော လူတို့ သည်လည်း ဤနည်းနှင်နှင် စိတ်ကူးယဉ်ကာ အိပ်မက်လောကထဲ၌ တစ်သံသရာလုံးလုံး နေလာခဲ့ကြသည်ချည်း ဖြစ်လေသည်။
Buddhism sanon-theistic religion in that one does not worshipaGod, creator or savior Progress on the Buddhist path to enlightenment is not dependent on an external force but on one's own effort. Buddhist cosmology does recognize the existence of heavenly realms, and the divine beings living there are very similar to what people would associate with gods or God. Because of the fundamental law of impermanence however, even these beings are subject to passing away and being reborn, still caught in the cycle of birth and death, and therefore not taken as an ultimate refuge.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:15 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:56 AM0comments Links to this post
ခင်မင်ရတဲ့ ဓမ္မမောင်နှမတို့ ရေ
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့(၇၊ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၀၉ ) မှာ ကျွန်တော် ကောင်းမှုကုသိုလ် တစ်ခုကို ထူးထူးခြားခြားလေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းလေးကို ပြောပြချင်လို့ ပါ။ အဲဒီနေ့ က လုပ်ခဲ့တာကို စပြီး မပြောပြခင် ဒီကုသိုလ် လုပ်ဖြစ်ဖို့ အတွက် အကြောင်းကြောင်းတွေဖြစ်လာပုံလေး
ကို အရင် ပြောပြချင်ပါတယ်။
မနှစ်ကပါ။ ကျွန်တော်လည်း ဒီတိုင်းပြည်ရောက်ခါစ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ထုံးစံအတိုင်း မြို့ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရုပ်ပွားတော်တွေကို လိုက်ဖူးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနှင့်ဘဲ Tokyo Daibutsu လို့ ခေါ်တဲ့ ဘုရားကြီးဆီကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားကိုရောက်တော့ ဘုရားရှိခိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာစရာရှိတာတွေ လျှောက်လေ့လာရင်းက ဘုရားကျောင်းဝင်း အနောက်ဘက်မှာ သုဿန် တစ်ခု ရှိတာကို သတိထားလိုက်မိပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာက များသောအားဖြင့် သုဿန်တွေကို ဘုရားတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ နှင့်တွဲပြီး ထားတတ်ကြပါတယ်။ သုဿန်ဆိုပေမယ့်လို့အရိုးပြာအိုးကိုဘဲ မြှုပ်ထားကြတာပါ။ နောက်ပြီး သန့် ရှင်းသပ်ရပ်မှုလည်း ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း စပ်စုချင်တာနှင့် သုဿန်ဝင်းထဲကို ၀င်ကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အထဲရောက်တော့ သူတို့ တွေရဲ့အုပ်ဂူ အမှတ်အသား တွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်ရင်းက ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲကို အတွေးတစ်ခု ၀င်လာပါတယ်။ အခု ဒီသုဿန်မှာ မြှုပ်ထားကြတဲ့သူတွေဟာ ငါနှင့် သံသရာ ဘ၀ တစ်ခုခုမှာ ဆွေမျိုးတွေတော့ တော်ခဲ့ဖူးမှာဘဲ။ ငါနှင့် မကင်းရာ မကင်းကြောင်း ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစားတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးမှာဘဲ။ အခုလည်း အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ငါ ဒီနေရာရောက်လာတယ်။ တကယ်လို့ များ ဒီနေရာမှ သူတို့ တွေ မမြင်အပ်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေအဖြစ်ရှိနေခဲ့ရင် ငါရောက်နေတုန်းလေး သူတို့ အတွက် တစ်ခုခု ကောင်းတာလုပ်ပေးမယ် လို့ဆန္ဒဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဘဲ ရတနာ (၃) ပါးကို အာရုံပြန်ပြု၊ ဘုရားစာတွေ စိတ်ထဲကနေရွတ်၊ နောက် မေတ္တသုတ်ရွတ်၊ ဂုဏ်တော်တွေရွတ်၊ ပြီးတော့ သူတို့ တွေအတွက်ရည်စူးပြီး မေတ္တာပို့ ၊ အမျှဝေ လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ က ဘုရားဖူးပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အိပ်တဲ့အခါ အိပ်မက်တစ်ခု မက်ခဲ့ပါတယ်။ အိပ်မက်ထဲမှာ လူတွေအများကြီးဘဲ။ ကျွန်တော့်ကို လာပြီး ပျော်ရွှင်ပြီး ၀မ်းသာအားရ စကားလာပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်နာမည်ကို ခေါ်ပြီး ”.......လုပ်တာ အရမ်းကောင်းတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်” ဆိုပြီး ပြောသွားကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိပ်ရာက နိုးလာတော့ အော်...ဒါ ငါ လုပ်လိုက်တာ သူတို့ အတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိလို့လာပြောကြတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် အားတဲ့ ရက်တွေဆိုရင် အဲဒီဘုရားကိုဖြစ်ဖြစ်၊ နောက် ကျွန်တော်တို့ မြို့ ထဲမှာဘဲ နောက်ထပ်သုဿန်အကြီးကြီးတစ်ခုရှိသေးတယ်။ လူနေရပ်ကွက် နှစ်ရပ်ကွက်၊ သုံးရပ်ကွက်စာလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ Nippori ဆိုတဲ့ နေရာမှာပါ။ သူကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်က ထောက်ကြံ့စစ်သင်္ချိုင်းလိုမျိုးဘဲ။ ရှုခင်းလည်း လှတယ်။ Tourists တွေကိုလည်း စွဲဆောင်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ အဲဒီ သုဿန်ကို ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီး ဘုရားစာရွတ်၊ မေတ္တာပို့ ၊ အမျှဝေ လုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ အဲဒီနေရာတွေကို သွားတိုင်း ဒီနေရာမှာ ရှိနေကြတဲ့ သူတွေဟာ ဒါ ငါနှင့်သံသရာမှာ အဘိုးအဘွား၊ မိဘ၊ ဇနီးခင်ပွန်း၊ ညီအကို၊ နှမ၊ အစ်မ၊ သားသမီး၊ ဦးကြီးဦးလေး၊ ဒေါ်ကြီးဒေါ်လေး၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ ဆရာ၊ တပည့်၊ အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်စသည်ဖြင့် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေလို့နှလုံးသွင်းပါတယ်။ သူတို့ ကို ငါတတ်နိုင်သလောက် ကျေးဇူးပြန်တုံ့ ပြန်မယ်လို့ လည်း နှလုံးသွင်းပါတယ်။ နောက် သံသရာဘ၀တွေမှာ သူတို့ တွေနှင့်ငါနှင့် လက်တွဲပြီး အတူတကွ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကို လုပ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ များ သူတို့ တွေက အဲဒီကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာတွေကို မေ့လျော့နေခဲ့ရင် ငါ့ကို ပြန်မြင်တဲ့ခဏမှာ အဲဒါကို ချက်ချင်းပြန်သတိရပါစေ ဆိုပြီးတော့လည်း အာရုံပြုထားပါတယ်။
ဒီတိုင်းပြည်မှာက ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပေမယ့်လို့သူတို့ အယူအဆတွေက ကျွန်တော်တို့ နှင့် မတူတာများပါတယ်။ နောက်ပြီး လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုက ဘာသာတရားက သူတို့ နှင့်ခပ်ကင်းကင်းဖြစ်နေကြပြီး အချိန်တိုင်း လောကီအောင်မြင်ရေးတွေနှင့် နပမ်းလုံးနေကြတဲ့ သူတွေဆိုတော့ သူတို့ လက်ကိုင်ထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုက အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့နေ့အသက်မရှိတဲ့နေ့လို့ကို ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီတော့ သူတို့ တွေရဲ့ ဘ၀ကူးဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ မောင်နှမတို့ တတွေ မှန်းကြည့်နိုင်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်နော်။
ကျွန်တော် အဲဒီလိုမျိုး လုပ်ပေးနေရင်းက စိတ်ထဲမှာ သိပ်အားမရချင်ဘူးဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ငါအခုလိုလုပ်နေတာထက် ပိုပြီးထိရောက်တာမျိုး သူတို့ တွေကို လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့တွေးမိပါတယ်။ မိမိထက် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သာလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေ လုပ်ပေးနိုင်ရင် သူတို့ တွေအတွက် ပိုအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရဟန်း၊ သံဃာတွေကို ပင့်ဆောင်ပြီး လုပ်ပေးလို့ ရရင် သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။
ကျွန်တော် အဲဒီလိုမျိုး သုဿန်သွားသွားပြီး လုပ်ပေးနေတာကို သိတဲ့သူတွေထဲမှာ တချို့ ကလည်း ၀မ်းသာကြည်နူးကြသလို၊ တချို့ ကလည်း ဒီကို ရောက်တာမှာ နှစ်မပေါက်သေးဘူး၊ ဂေါက်သွားပြီထင်တယ်လို့ပြောသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ နောက် တချို့ ကလည်း သေတာတို့ ၊ သုဿန်တို့ ဆိုရင် တွန့် ကြ၊ စပ်ဆုပ်ကြတာတို့ တွေ ရှိသေးတော့ ကျွန်တော့်မှာ နောက်ပိုင်း ကိုယ်ဘာသွားသွားလုပ်နေတယ်ဆိုတာကို လူသိမခံဘဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် နှင့် လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘုန်းကြီးကျောင်းက သီတင်သုံးနေကြတဲ့ ဆရာတော်တွေကို လျှောက်ကြည့်ချင်ပေမယ့်လို့အခွင့်အခါမပေးသေးတာကြောင့်ထင်ပါရဲ့ ။ ကျောင်းတောင် သိပ်မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနှင့် ဒီဘက်လပိုင်းတွေမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ခဏခဏရောက်ဖြစ်တာရယ်၊ အခုလောလောဆယ် သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေကလည်း လူငယ်ပိုင်းကိုယ်တော်တွေ၊ ဆက်ဆံရတာ စိတ်ထဲမှာ ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှုလည်း ရှိနေတာနှင့် ဘုန်းဘုန်းတွေကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး တပည့်တော် သူတို့ သူတို့ တွေအတွက် ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးချင်၊ အမျှဝေပေးချင်လို့ ပါလို့လျှောက်ထားတော့ ဘုန်းဘုန်းတွေက လိုလိုလားလားဘဲ ဒါ တအားကောင်းတဲ့ကိစ္စ၊ လုပ်ကြတာပေါ့ဆိုပြီး ဘုန်းဘုန်းတွေ အားမယ့်တစ်ရက်ကို Appointment ယူလာလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒါနဲ့ ဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့ (၇) ရက်နေ့ က ကျွန်တော် တအားလုပ်ချင်နေတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပြည့်ဝစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ က မနက်ပိုင်း ဘုန်းဘုန်း သုံးပါးကို နေ့ ဆွမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘဲ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါတယ်။ နောက် ကျောင်းမှာရောက်နေကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေကို နေ့ လည်စာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံပါတယ်။ အားလုံး စားသောက်ပြီးကြတာနှင့် ဘုန်းဘုန်းတွေနှင့်အတူ Tokyo Daibutsu ကို စတင်သွားရောက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့်အတူ ကျောင်းကိုရောက်နေတဲ့ ဧည့်သည်တွေကလည်း စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဆိုပြီး လိုက်လာခဲ့ကြတော့ အားလုံး လူစုံတက်စုံတပျော်တပါးပါဘဲ။
ဘုရားရောက်တော့မှ ဘုရားဆင်းတုတော်ကြီးရှေ့ မှာ ဘုန်းဘုန်းတွေက သီလပေး၊ တရားဟော၊ တရားနာ၊ ပရိတ်ရွတ်၊ မေတ္တာပို့ ၊ သံသရာဆွေမျိုးတွေအတွက် ရည်မှန်းပြီး သင်္ကန်းပရိက္ခရာလှူဒါန်း၊ ပြီးတော့ အမျှဝေ လုပ်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတွေကလည်း တကယ့်ကို စေတနာ၊ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ အပြည့်နှင့် ဦးဆောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးတော်မူကြပါတယ်။
အဲဒီဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးရှေ့ နေရာမှာ တရားဟော၊ တရားနာပြီးသွားကြတော့မှ သုဿန်နေရာကို သွားပြီး ဘုန်းဘုန်းတွေက မေတ္တာပို့ ၊ အမျှဝေကို ထပ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပေးတော်မူကြပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတွေက အားလုံးကိုယ်စား တညီတညာတည်း အောက်ပါအတိုင်း ရွတ်ဆိုတော်မူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တွေက စိတ်ထဲကနေ အာရုံပြုထားလိုက်ကြပါတယ်။
“ဣဒံ မေ ဉာတီနံ ဟောတု၊ သုခိတာ ဟောန္တု ဉာတယော။”
မေ = အကျွန်ုပ်၏ ၊ ဣဒံ (ပုညံ) = ဤယနေ့ ယခုပြုလုပ်ဆောက်တည်ရသော ဒါနကုသိုလ်၊ သီလကုသိုလ်၊ ဘာဝနာကုသိုလ်စသည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ သည် ၊ ဉာတီနံ = အစမထင်သော သံသရာတစ်လျှောက်တွင် ဘ၀အဆက်ဆက်က တော်စပ်ပတ်သက်ခဲ့ကြသော အဆွေအမျိုးတို့ အား ((၀ါ) ဆွေမျိုးတို့ ၏ အတ္တာယ = အကျိုးငှာ ) ဟောတု = ဖြစ်ပါစေသတည်း။
ဉာတယော = ထိုဆွေမျိုးအပေါင်းတို့ သည် ၊ သုခိတာ = ချမ်းသာခြင်း ရှိကြကုန်သည်၊ ဟောန္တု = ဖြစ်ကြပါစေ ကုန်သတည်း။
မေတ္တာပို့ ရွတ်ဆိုပြီးတဲ့နောက် သုဿန်ထဲမှာဘဲ ရေစက်ချအမျှဝေခြင်းကို ထပ်မံပြုလုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မှာ အယူဝါဒမတူတဲ့သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ အရပ်ဒေသတစ်ခုမှာ ထေရ၀ါဒအယူအဆနှင့် လုပ်နေကြရတာဖြစ်တော့ ဘေးလူတွေ သတိမထားမိအောင်ဘဲ Informal တော့ ဆန်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ အားလုံးက မတ်တပ်ရပ်ပြီးဘဲ နေကြပါတယ်။ ရွတ်တဲ့ ဘုန်းဘုန်းတွေကလည်း တိုးတိုးညင်ညင်လေးရွတ်၊ လိုက်ဆိုကြတဲ့ သူတွေကလည်း ခပ်တိုးတိုးဘဲပေါ့။ ရေစက်ချတော့လည်း မသိမသာလေးဘဲ။ (ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ ဒီတစ်ခါဘဲ ရေသန့် ဗူးနှင့် မြေကြီးပေါ်ကို လောင်းပြီး ရေစက်ချအမျှဝေ ပထမဆုံး လုပ်ဖူးခြင်းပါဘဲ။)
အဲဒီလိုနှင့် Tokyo Daibutsu မှာ လုပ်တဲ့ အစီအစဉ် အောင်မြင်စွာနှင့် ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တွေ Nippori သုဿန်ကို ဆက်လက်ချီတက်ကြပါတယ်။
Nippori မှာတော့ တရားထပ်ဟော၊ ထပ်နာမလုပ်တော့ဘဲ တန်းပြီးဘဲ သုဿန်ထဲမှာ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်း အမျှဝေ၊ ရေစက်ချ လုပ်ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကို ပြန်အာရုံပြုပြီးတော့ပေါ့။
အားလုံးပြီးသွားတော့ ညနေလည်း စောင်းသွားပါပြီ။ ဘုန်းဘုန်းတွေရော၊ ပရိတ်သတ်ရော အားလုံးလည်း ပင်ပန်းသွားကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မှုတွေ ကိုယ်စီနှင့်ပါဘဲ။ ကျွန်တော့်ကိုတော့ မမေးနှင့်တော့လေ။ ကျွန်တော် ဘယ်လောက် ၀မ်းသာကြည်နူးနေမလဲဆိုတာကို။
ကျွန်တော်တို့ တွေ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးနေသလိုဘဲ ကျွန်တော်တို့ မမြင်နိုင်တဲ့ သူတွေ အယောက်ပေါင်းများစွာဟာလည်းဘဲ ဒီလို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ကုသိုလ်အခွင့်အရေးမျိုးနှင့် ဆုံဆည်းကြုံကြိုက်ခွင့်ရကြလို့ဘယ်လောက်များ ၀မ်းသာနေကြရှာမလဲ။ သူတို့ သူတို့ တွေရဲ့လက်ရှိဘ၀အနေအထားကနေ ဒီ့ထက်မက သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုခုကို သူတို့ ကံအားလျော်စွာ ရောက်ရှိခံစားကြရမှာကတော့ ဧကန်အမှန်ဘဲဖြစ်မှာပါ။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်ကတော့ ဒီအမှတ်တရ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကို တွေးမိတိုင်း ကြည်းနူးဝမ်းသာလို့ မဆုံး ဖြစ်မိပါတယ်။ တကယ်ပါ။ ဘာ အကျိုးခံစားခွင့်ကိုမှ မမျှော်လင့် မတောင့်တပါဘူး။ ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကို လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒဘဲရှိတာပါ။ လုပ်ပေးလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ ချမ်းသာတယ်။ ကြည်နူးတယ်။ ဒါလေးပါဘဲ။ ကျွန်တော် တစ်ခါက ရေးပြခဲ့ဖူးတဲ့ George Bernard Shaw ရဲ့Splendid Torch ကဗျာထဲက စာသားလေးတစ်ကြောင်းအတိုင်းပါဘဲ။ It is my privilege to do for it တဲ့။ ဒါဟာ ငါ့လုပ်ရမယ့် တာဝန် ၀တ္တရားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ငါ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ လို့ ။ အဲဒီလိုလေး ခံစားမိပါတယ်။
အဲ.... ကျွန်တော် အာလူးဖုတ်တာများသွားပြီ။ အဓိက မောင်နှမတွေဆီ ဒီစာရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့သမျှ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ ကို အမျှပေးဝေချင်လို့ ပါ။ ကျွန်တော်အဲဒီနေ့ က သံသရာတစ်လျှောက်ကတော်စပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆွေဟောင်းမျိုးဟောင်းတွေ အားလုံးအတွက် လုပ်ခဲ့သမျှ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ ကို ဓမ္မမောင်နှမတွေအားလုံးကို အမျှပေးဝေပါတယ်။ အားလုံး ကျွန်တော်နှင့်ထပ်တူ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတွက် ၀မ်းမြောက်ကြည်နူးစွာဖြင့် သာဓုခေါ်ဆိုတော် မူကြပါခင်ဗျား။
(ဤ အီးမေးလ်စာစုဖြင့် တပည့်တော်၏ ကုသိုလ်ပြုလိုသော ဆန္ဒကို မငြိုမငြင် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် မေတ္တာ ကရုဏာ အပြည့်အ၀ဖြင့် ကူညီတော်မူသော တိုကျို မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သံဃာတော်အရှင်မြတ် ဘုန်းဘုန်းတို့ အား တပည့်တော် ရိုသေစွာ ရှိခိုးဦးတင် ကန်တော့ပါတယ် အရှင်မြတ်အပေါင်းတို့ ဘုရား။ )
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:27 AM4comments Links to this post